Shaqaalaysiinta | RayHaber | raillynews
TCDD Tasimacilik AS wuxuu shaqaaleysiin doonaa Saraakiisha 52! Cabbiraad, Xulashada iyo Xarunta Meelaynta ee OSYM “52 / 2019 KPSS [More ...]
TÜVASAŞ KPSS wuxuu u shaqeeyaa sarkaalka ugu hooseeya 70 Points
Agaasinka guud ee TÜVASAŞ wuxuu shaaca ka qaaday inay shaqaaleysiin doonto saraakiil xilal kala duwan ka soo qabtay dhibcaha '70' ee KPSS. Agaasinka Guud ee TÜVASAŞ wuxuu daabacay KPSS '70' dhibco ah jagooyin kala duwan. [More ...]
Codsiyada qoritaanka Gaadiidka TCDD ayaa la bilaabay. Daabacaadda shaacinta ISKUR, bog codsi ayaa loo furay qorista shaqaalaha TCDD Gaadiidka 88 shaqaalaha dadweynaha. Codsiyada shaqaalaysiinta ee Gaadiidka TCDD ayaa la bilaabay. Turkey Association Business (TEO) Internet [More ...]
Arjiyada Shaqaalaha ee Sarkaalka TCDD ayaa gaadhay Maalintii Ugu Dambaysay!
TCDD waxay soo saartay ogeysiis soo iibsi oo ku saabsan baahida shaqaalaha rayidka ah. Si kastaba ha noqotee, dalabyadu waxay gaareen maalmihii ugu dambeeyay. Halkan waxaa ah faahfaahinta sii wadida wararkayaga. Sida ku xusan ogeysiiska ay daabaceen Madaxtooyadu bishii Oktoobar, la'aanta shaqaale rayid ah oo ka dhex jira TCDD [More ...]
Sarkaalka TCDD 704 iibsashada! KPSS 2017 / 2 Xarunta Xarunta
TCDD waxay shaqaaleysiineysaa saraakiisha 2017 si ay u shaqaaleysiiyaan meelaynta dhexe ee KPSS 2 / 704. Codsiyada waa la soo gabagabeynayaa, waa maxay faahfaahintu. Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta [More ...]
KPSS 2017 / 2 Doorashooyinka TCDD 573 Doorarka Aqoonsiga iyo Shuruudaha Codsiga
Kala doorbidista KPSS 2017 / 2 ayaa bilaabatay. Xaaladda guud, qoritaanka shaqaalaha rayidka ee TCDD sidoo kale waa la sameyn doonaa. Iyada oo la adeegsanayo xulashada ballamaha dhexe, laxiriirayaasha iyo shaqaalaha qoritaanka ee shaqaalaha dadweynaha TCDD, shuruudaha dalabka waxaa lagu soo daray wararkeena. KPSS oo leh galitaanka 2017 / 2 [More ...]
TCDD 90 ayaa qaadan doona Sarkaal!
KPSS waxaa qaban qaabin doona OSYM 2017 / 2 TCDD meelaynta ka qalin-jabinta meelaynta meelaynta ayaa shaqaalaysiin doona shaqaalaha rayidka ah ee 90. Marka waa maxay jagooyinka. Hay'adaha dowliga ah ee ka shaqeeya Turkiga [More ...]
Soo-dhaweynta 1.118 ee TCDD: Kaliya Shaqaale 5 Xayeysiiska!
Waxaa la sheegay in qoritaanka saraakiisha 1.118 lagu sameyn doono baaxadda TCDD, laakiin ogeysiiska shaqaalaysiinta ee shaqaalaha 5 waa la daabacay. Maxay yihiin aragtidaada ku saabsan mawduuca? Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa bayaan ka soo saaray heerka sarkaal TCDD 1.118 [More ...]
Injiilka ka yimid Wasiirka Arimaha Bulshada! Sarkaalka TCDD 700 ayaa iibsan doona!
Wasiirka Gaadiidka, Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan'dan PTT, TCDD iyo Wadooyinka Waaweyn ayaa ku dhawaaqay shaqaaleysiinta shaqaalaha. Waa tan macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan shaqaalaysiinta Wasiir Arslan. Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet [More ...]